Na eo aza ny Virus, Tunnel sy Bridges Ny antoka dia vita | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulNa eo aza ny Virus, Tunnel sy Bridges Garment Garant dia vita
05 / 05 / 2020 34 Istanbul, 41 Kocaeli, ANKAPOBENY, Rohibe, Highway, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
Na eo aza ny tonelina viruse sy ny garantiana fiantohana dia feno tanteraka
Noho ny hery majeure noho ny tsimok'aretina Corona dia niresaka ny fifaranan'ireo fifanarahana na ny fanemorana ny fandoavana. Na izany aza, ny fandoavam-bola avy amin'ny talenta Eurasia, Osmangazi ary Yavuz Sultan Selim dia vita tanteraka.
Araka ny vaovao momba an'i Yusuf Demir avy any SÖZCÜ; ” Noho ny areti-mifindra ny tsimokaretina Corona dia nijanona ny kodiarana ara-toekarena, olona an-tapitrisany no tsy nanana asa, vetivety fotoana fohy, ary koa ireo mpivarotra manohana ireo trosa dia tsy voaloa feno, raha toa kosa ka tsy nampihemotra ny volan'ny mpiantoka.
Ny tale jeneralin'ny làlam-pandehanana, ny Tunnel Eurasia izay namboarina niaraka tamin'ny modely "Build-Operate-Transfer", Istanbul-İzmir sy làlan'ny Marmara Avaratra, Yavuz Sultan Selim sy Osmangazi tetezamita nandoa ny ambiny tamin'ny sandry 2019 tamin'ny 30 aprily. Tsy nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny vola aloan'ny orinasa.
Ny fandoavam-bola dia raisina arakaraka ny fifanarahana tamin'ny tahan'ny tamin'ny 2 Janoary tamin'ny taona mifandraika ary natao tamin'ny volana aprily amin'ny taona manaraka. Miaraka amin'ny fandaharana natao tamin'ny herintaona, ny fandoavam-bola roa dia isan-taona amin'ny vidin'ny dolara tamin'ny 2 Janoary sy 1 jolay.
3 MITADY MASINA INDRINDRA
Tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taon-dasa dia 1 litre no nomena tany amin'ny consortium, izay tsy niasa tamin'ny tetezana Yavuz Sultan Selim ihany no niasa. Voalaza fa ny sandam-bola tokony handoavana ny ampahatelon'ny taona faharoa dia raisina ho toy ny 450 dolara 1 tapitrisa.
Miaraka amin'ity fandoavam-bola ity, ny vola naloan'ny orinasa nandritra ny 1 taona avy amin'ny paosin'ilay olom-pirenena dia nahatratra 3 lavitrisa litatra 50 tapitrisa. Noho ny kajy ny fandoavam-bola mifototra amin'ny dolara, ny hetra avy amin'ny olom-pirenena tsy mbola nampiasa ireny tetezana ireny sy ny làlana dia nandoa vola 2018 miliara 2 tapitrisa TL ho an'ny mpiadidy fanjakana tamin'ny taona 2018 tamin'ny 1 Janoary 3.76 dolara (3 Dolara = 650 TL).
Araka ny fandaharan'asan'ny Filoham-pirenena 2020 isan-taona, 8.3 miliara lira dia natokana ho an'ny antoka omena ireo orinasa ao amin'ny tetikasa Public Private Cooperation (PPP) an'ny ministeran'ny fitaterana. Ankoatra ny tetezana, ny tonelina ary ny lalambe, misy koa ny fandoavam-bola amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fiaran-dalamby. Istanbul Airport dia voahilika amin'ity kajy ity.
TANDREMO NY TOKONY HALEO
Ny solombavambahoaka lefitry ny vondrona CHP Özgür Özel dia nanantitrantitra fa ny fahatarana dia nanofa trano, hetra, saram-piantohana ary fandoavana ny trosa noho ny «force majeure» nandritry ny valan'aretina corona.
Amin'izao vanim-potoana izao, raha saika tsy azo atao ny mitady vola hanampiana ny vahoaka noho ny valan'aretina Corona, dia nanolo-kevitra i Özel fa tokony hahemin'ny governemanta ny famoahana ny antoka alohan'ny tetikasa Public Private Partnership izay nataony ho an'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fanehoana hery manaja ny toe-karena sy ny fidiram-bolam-bahoaka.
Vaovao mahafaly farany! Ny fandoavana ny fisotroan-dronono ho vita ny 15-22 Mey
Voaray ny karatra 2018 ho an'ny bus public
Ny fandoavana vola amin'ny vola 2 TL ho an'ny trano an-tapitrisany 300 tapitrisa no nanomboka
Ny fivoaran'ny virona virus
Androany amin'ny tantara: 6 May 1942 Erzurum-Karabıyık Inns
Ny fanohanan'ny antoko faharoa 200 Fahazoana aina amin'ny sigara avy amin'ny Garanti BBVA
Ankara - Tetikasa lalamby haingam-pandeha ambony haingam-pandeha 2 any an-tsambo
Eurasia Tunnel Nofonaina avy amin'ny Garanti Bank
Gokceke dia tsy niantoka ny metro Ankara
CHP Special: 'Fandroahana ny fandoavana vola